डान्सिङ सुपर स्टारको उपाधि शिवमलाई - GBM
मुख्य समाचार समाचार साहित्य/मनोरन्जन
डान्सिङ सुपर स्टारको उपाधि शिवमलाई
२०७४ पुष ४ gautam buddha sandesh	0 Comments
भैरहवा, ४ पुष । भैरहवा डान्सिङ सुपर स्टारको उपाधि भैरहवाका शिवम चौधरीले प्राप्त गरेका छन् । शनिवार भैरहवामा सम्पन्न ग्राण्ड फाइनल राउण्ड बाट जिल्लाभरीका विभिन्न विद्यालयबाट छनौट भएका १६ जना प्रतिस्पर्धीलाई उछिन्दै चौधरी प्रथम भएका हुन् । उनले जीत सँगै रु. ५० हजार सहित सम्मानपत्र प्राप्त गरेका छन् ।
त्यस्तै प्राप्ती तामाङ द्धितिय, ऋद्धिमा के.सी. तृतीय हुन सफल भएका छन् उनीहरुले क्रमश : २० हजार र १० हजार प्राप्त गरेका छन् । त्यस्तै सुविसु कुवँर चौथो र नेहारीका ठकुरीले पाँचौ स्थान प्राप्त गरेका छन् उनीहरुलाई गिफ्ट ह्यापर र अवार्डले सम्मान गरिएको थियो । कार्तिक १८ गते देखि सुरु भएको अडिसन रुपन्देहीको अमुवा, मणिग्राम र भैरहवामा सम्पन्न भएको र २ सय जना सहभागी भएको रुद्रादेवी कला केन्द्रका सञ्चालक सुनिल गुप्ताले बताए ।
त्यस्तै आर.के विनर बाट कृष्टीना सेन्चुरी विजेता भएकी छन् उनले जित सँगै नगद रु. २५ हजार प्राप्त गरेकी छन् । उनले आफुले प्राप्त गरेको रकमबाट नगद १० हजार भैरहवाको लुम्बिनी रोडमा अवस्थित सिद्धार्थ बालगृहलाई सहयोग स्वरुप प्रदान गरेकी थिइन् ।
कार्यक्रममा डान्स प्लस थ्री द नेपोलिक क्रियु वि.एन.३० र भारतको मुम्बईबाट भरत शाही लगायतका कलाकारहरुको उपस्थिती रहेको थियो । प्रतियोगितालाई नसिब गार्मेन्ट उद्योगले मुख्य प्रायोजन गरेको थियो ।
← नयाँ नीतिको आवश्यकता : ढकाल
किन कमजोर भयो कांग्रेस ? →
स्टेज कार्यक्रममा राजेश पायल राईमाथि हातपात
२०७८ पुष १८ gautam buddha sandesh	0
कथाकार लामिछानेलाई मीनपद्म पुरस्कार
२०७४ कार्तिक २४ gautam buddha sandesh	0